KYAW CHAN NYEIN: Emotion Management & Mindful Compassion တရားပွဲသင်တန်း (Part6- B)
Emotion Management & Mindful Compassion တရားပွဲသင်တန်း (Part6- B)
(ကိုယ် စိတ်နှစ်ပါး အပန်းဖြေနည်း)
🔯 Your body is exhausted because you tired. The muscles are tense and heavy because over the weeks, over the months, over the years, you have been accumulationalot of stress. Don't fight with exhaustion. Just accepted and take the celebration for the tired body.
ခေါင်းမှာလည်းပဲ ခေါင်းပေါ်က ကြွက်သားတွေ၊
ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းက ကြွက်သားတွေ တင်းနေတာ။
အဲ့ဒါ ဒီအတိုင်းပဲ လက်ခံလိုက်ပါ။
အရှိကို အရှိအတိုင်းလက်ခံလိုက်။ ပြုပြင်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့။
🔯 Don't interfere with the physical process. Just accepted totally with the interfering with the process. Then the body will heal itself. ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ဟာသူ healing ရလာလိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ သူ့ကို register (အသိအမှတ်ပြု)လုပ်ပေးရမယ်။ ပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာ register လုပ်ပေး။ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပေး။ deep and slow breath. Deep, slow and gentle breath.
★ အစာအိမ်ကို စိတ်ပို့လိုက်ပါ။
အစာချေချက်နေတဲ့ အစာအိမ်။ စားလိုက်တဲ့အစာတွေနဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ။
ချက်တော့လည်း ရွေးပြီးတော့ ချက်လို့ရတယ်။
၀ါးတော့လည်း ရွေးပြီးတော့ ၀ါးလို့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် အစာအိမ်က ရွေးခွင့်မရှိပါဘူး။
အစောပိုင်းက ၀ါးထားသမျှ၊ မြိုထားသမျှ၊ အစာအိမ်က ချက်ရတယ်။
★★ ဒါ့ကြောင့် ဒီလောက်အထိ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ အရေးပါလှတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ အစာအိမ်ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပါ။
အစာအိမ်နားမှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ တင်းနေတာ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပြီးတော့ ကြွက်သားတွေ လျော့ပေး ။ (relax) လုပ်ပေး။
★ အခုတစ်ခါ ဦးခေါင်းကို စိတ်ပို့လိုက်ပါ။
ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ကြွက်သားတွေ တင်းနေတာ ပင်ပန်းလို့။ စာရေးလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
Facebook တွေ အကြည့်များလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ စကားပြောတာများလွန်းလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အလုပ်လုပ်လွန်းလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
မဟုတ်ရင်လည်းပဲ အရက်ရက် အလလက စုထားတဲ့ stress တွေ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
Stress Chemical (စိတ်ဖိစီးမှုဓာတ်) တွေ စုနေတာ။
★★ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပေး။ ညင်ညင်သာသာ ရှုရှိုက်ပေး။
ဦးခေါင်းက ကြွက်သားတွေမှာ ရှိတဲ့ တင်းမာမှုတွေ လျှော့ပေးပါ။
Let go လုပ်ပါ။ release လုပ်ပါ။ အတင်းတော့ မလုပ်နဲ့။
ညင်ညင်သာသာပဲ အသက်ရှု။ ညင်ညင်သာသာပဲ Register လုပ်ပါ။
ဒါ ခန္ဓာကိုယ်ကို မေတ္တာလက်တွေ့ပွားနေတာပါ။
ဒီ တင်းမာမှုတွေ ပျောက်သွားပါစေ ဆိုပြီးတော့ အတင်း Force လုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အဲ့ဒီလို လုပ်ရင် negative reaction ရတတ်ပါတယ်။
★ အခုတစ်ခါ နဖူးရယ်၊ မျက်လုံးနှစ်ဖက် ၀န်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေရယ်၊ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးရယ်။ ကြွက်သားတွေတင်းနေတာကို သတိကပ်ထားလိုက်။ ကြွက်သားတွေ တင်းနေတယ်။ လျော့ပေး။ relax လုပ်ပေး။ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပေး။ လျှာကို ကိုက်မထားနဲ့။ လျှာကို relax လုပ်ထားပါ။
The muscles around your forehead, around your eyes, your cheek both left and right, your chin all the muscles are tense because you are tired. Relax . Place your tongue on the flow of your mouth and breath in and out slowly , gently.
★ ပုခုံး၊ လက်မောင်း၊ တံတောင်ဆစ်၊ လက်နှစ်ဖက်။ နောက် လက်ဖ၀ါး၊ လက်ဖမိုး၊ လက်ချောင်းတွေ။ သူတို့မှာလည်း ကြွက်သားတွေ တင်းနေတာ။ ပင်ပန်းလို့။ လျော့ပေး အနားပေးလိုက်။ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပေး။ Deep and Slow breath in , deep and slow breath out.
★ အခုတစ်ခါ ကျောရိုးကို အာရုံပို့လိုက်ပါ။ စိတ်ပို့လိုက်ပါ။
ကျောရိုးတစ်လျှောက်မှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ။ သူတို့လည်း ပင်ပန်းနေတယ်။
နောက် ခါး တစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားလည်း ပင်ပန်းနေတယ်။ ထိုင်တဲ့အခါလည်းပဲ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို support (ထောက်ပံ့) ပေးရတဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ရပ်တဲ့အခါလည်း ဒီအတိုင်း၊ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါလည်း ဒီအတိုင်း။ အဲ့ဒီတော့ ဒီ ကျောရိုးမှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ stress တွေကို စုထားတာ။ accumulate လုပ်ထားတာ ပင်ပန်းနေတယ်။ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပေး။ အနားပေးပါ။ စိတ်လည်းလျှော့။ ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတွေလည်းလျှော့။
★ အခုတခါ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း၊
ပေါင်နှစ်ဖက်၊ဒူးနှစ်ဖက်၊ ခြေသလုံး။ ခြေမျက်စိ၊ ခြေဖနောင့်၊ ခြေဖ၀ါး၊ ခြေဖမိုး၊ ခြေချောင်းလေး။ မနားတမ်း အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ break time မရှိဘူး။ လမ်းလျှောက်ရင်လည်းပါတယ်။ ထိုင်ရင်လည်း ပါတယ်။ ရပ်ရင်လည်းပါတယ်။ ခြေသလုံးနဲ့ ပေါင်ကို ဒူးက coordinate လုပ်ပေးရတယ်။ အဲ့ဒီ coordination လုပ်ရတာလည်း နားချိန်မရှိဘူးတဲ့။ အကုန်လုံး ပင်ပန်းနေတာကိုး။ တကိုယ်လုံး ပင်ပန်းနေတယ်။ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှုရှိုက်ပေး။
★ အခုတစ်ခါ ၀င်လေထွက်လေကို စိတ်မှာ ပြန်ပို့လိုက်ပါ။ ၀င်လေထွက်လေမှာ အသိလေး ကပ်ထားလိုက်။ ညင်ညင်သာသာ အေးအေးဆေးဆေး ၀င်လေထွက်လေရှုရှိုက်ပါ။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ကရုဏာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ ၀င်လေထွက်လေ၊ ရှုရှိုက်ပေးပါ။ ဒီကြားထဲမှာ စိတ်သောကတွေ၊ (anxiety) တွေ ၀င်လာတယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ကို register လုပ်လိုက်။ (အသိအမှတ်ပြုလိုက်)။ ပြီးရင် ၀င်လေထွက်လေ ဆက်ပြီးတော့ ရှူ၊ ကျကျနန အားရပါးရ အသက်ရှူရှိုက်တယ်ဆိုရင် အဆုတ်ထဲကို အောက်ဆီဂျင် လုံလုံလောက်လောက်ရောက်သွားမယ်။
★ နှလုံးထဲကနေ ရောက်လာတဲ့ သွေးတွေ၊ အဆုတ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်အပြည့်အ၀နဲ့ ပြန်ထွက်သွား။ တစ်ကိုယ်လုံးရောက်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး healing တွေ၊ သူ့ဟာနဲ့သူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှူရှိုက်ပေး။ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းတာ၊ စိတ်ပင်ပန်းတာကို လက်ခံ။ unconscious reaction ဆိုတာ မသိစိတ်က တုံ့ပြန်တာမျိုး၊ လက်မခံတာမျိုး၊ ထွက်ပြေးတာမျိုး၊ ရှိတတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတိပေးရတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းနေတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းနေတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိပေး၊ သတိပေးပြီးတော့ ၀င်လေထွက်လေ ကျကျနန ရှူရှိုက်။
★ အခုတစ်ခါ ခေါင်းကနေပြီးတော့ ခြေဖ၀ါးအထိ တံမြက်စည်းလှဲသလို စုပြီး သတိကို တကိုယ်လုံး ခေါင်းကနေပြီး ခြေဖ၀ါးအထိ သတိလေးနဲ့ ကြည့်ပေးပါ။ တင်းနေတဲ့နေရာလေးရှိရင် အဲ့ဒီတင်းနေတဲ့နေရာ လက်ခံလိုက်။ ပင်ပန်းနေတယ်။ တင်းနေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ပေးတဲ့ message ကို အသိဥာဏ်လေးနဲ့ ဖတ်ကြည့်။ ၀င်လေ ထွက်လေ။ ကျကျနန ရှူရှိုက်ပေး။ ဒီ relaxation exercise ၊ ကိုယ် စိတ် နှစ်ပါး အပန်းဖြေတဲ့နည်းပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ လုပ်လို့ရတယ်။ ရုံးခန်းမှာလည်း လုပ်လို့ရတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း လုပ်လို့ရတယ်။ ထမင်းစားပြီး ငါးမိနစ်၊ ဆယ်မိနစ်လောက် စားတဲ့နေရာမှာတင် လုပ်လို့ရတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းမှုနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုကို အသိနဲ့ coordinate လုပ်ပေးတယ်။ ကြားဝင်ပြီးတော့ ညှိနှိုင်းပေးတယ်။ စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အချင်းချင်း နားလည်မှုရှိအောင် ညှိပြီးတော့ တစ်ပြိုင်နက် အနားယူတာ။
ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေပါပြီ။ မျက်လုံး ဖွင့်လို့ရပါပြီ။ ဒါ သုံးပတ်လောက် လုပ်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ပါ။ ။ ပြောချင်တာကတော့ negative emotion ကို အကောင်းအဆိုး မဝေဖန်နဲ့။ သတိတရား၊ သတိပဋ္ဌာန်၊ mindfulness လို့ခေါ်တယ်။ non-judgmental mindfulness။ ဒီဟာနဲ့ manage လုပ်ပါတယ်။ ဒါ မနက်ပိုင်း ပြောခဲ့တဲ့ အရာတွေကို summarize လုပ်တာ။
Posted by KYAW CHAN NYEIN at 12:36 PM